-Arọ na ha Famous Oge gboo Music
Download free music, Mee YouTube dị ka Your Personal Music Isi Iyi
Mgbe anyị chere echiche banyere oge gboo music anyị na-emekarị na-eche banyere ọrụ nke Mozart ma ọ bụ Bach nakwa dị ka ndị agadi ndị ọzọ ọrụ. Onye ọ bụla maara na oge gboo music anọwo na n'ihi na ọgbọ na ka a na-eme n'ụdị music taa. Oge gboo music, dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ ụdị music na-aga n'ihu, ka ha webata karịrị oge dị ka ọhụrụ ọgbọ-arọ-anọgide na-ịzụlite ya. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya music bụ n'ezie a ndụ nkà ụdị dị ka ọ bụ ihe na-aga n'ihu na-eto eto ma na-agbanwe na oge. Ebe a bụ ụfọdụ n'ime n'elu iri oge a oge gboo-arọ nke taa.
A nke oge a dere bụ n'etiti otu nke taa Kacha ọhụrụ na-ese. Ọ maara nke ọma na-ere ya kasị nke ya CD na ndia online. Ọ bụ onye na-arụsi ọrụ ike soò na nke-ekwe ukwe obodo, na ka ekewet ọtụtụ ukwe iberibe. Ọ mara maka ọrụ ya:
• Ìhè & Gold
Ise Hibru Ịhụnanya Songs
Mmiri Night (N'ihi na urụk)
David Lang bụ ma ama n'ihi ya Pulitzer Nrite emeri olu ejije The Little egwuregwu girl Rihanna. Ya aha pụtara na fọk magazine nakwa dị ka New York Times. Ọ mara maka ọrụ ya:
Little egwuregwu Girl Rihanna
Corigliano bụ a mma-guzobere egwú andiwet onye na-arahụ na-emeri atọ awards ya music gụnyere Academy Award, Pultizer Nrite na Grawemeyer Nrite. Ọrụ ya na-agụnye:
Gypsy na mberede
Best mara maka ya post-oge gboo music, Richter ka ekewet ọtụtụ iberibe n'ihi fim na concerts. Ya music ka maara na-erughị dịkọrọ ndụ na ndị ọzọ onye meworo okenye ịke oge gboo, n'ihi ya "post oge gboo".
Recomposed Site Max Richter: Vivaldi, anọ kara
Testament nke Youth
E Dere na The Sky
Otu n'ime todays ọdụdụ-arọ onye rutere a ibuotikọ ke The New Yorker maka ọrụ ya, Muhly ka ekewet ọtụtụ ndị mara mma ọrụ nkà na-maara nke ọma na ndị oge gboo music obodo. Mara maka ọrụ ya:
Na-ekwu okwu Mpịakọta
6. Uru Part
Part si music eberede ọzọ na ime mmụọ n'ógbè na na-esite na oge gboo music ịke. Mara maka ọrụ ha:
M wee Mmụọ Nsọ
Part: mbadamba Rasa
Steve Reich bụ ma ama n'ihi ya egwú Usoro ke nke ọ kpọrọ "phasing" Okwu a imples ka music na nke abụọ ngwá na-egwuri egwu mmekọrịta gaa ndị ọzọ ntụziaka na music ibe ihe na-erughị a abụọ eke a pụrụ iche rhythmic ụda. Mara maka ọrụ:
WTC 9/11, mallet Quartet, Dance nakawa etu esi
Mara maka ọrụ ya dị ka ihe inweta orchestral na-ajụ, ọ bụ ikekwe otu n'ime ihe ndị ka mkpa ọgụgụ taa na oge a oge gboo music oge.
On The Transmigration nke mkpụrụ obi
Na Transmigration nke mkpụrụ obi
Ụwa a ma ama andiwet specializes na oké minimalist usoro ihe nkiri na bụ ọsọ ezinụlọ aha. Mara maka ọrụ:
Ná nrọ Teta
Greenstein mara maka malite New Amsterdam Records nakwa dị ka Ecstatic Music Ememme. Ọrụ ya na-agụnye albums:
Ọmụmụ Nke 3
> Resource> Music> Top 10 Modern-arọ na ha Famous Oge gboo Music